Spreadcoin စျေး - အွန်လိုင်း SPR ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Spreadcoin (SPR)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Spreadcoin (SPR) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Spreadcoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $24 875.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Spreadcoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Spreadcoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
SpreadcoinSPR သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0222SpreadcoinSPR သို့ ယူရိုEUR€0.0187SpreadcoinSPR သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0169SpreadcoinSPR သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0201SpreadcoinSPR သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.197SpreadcoinSPR သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.139SpreadcoinSPR သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.489SpreadcoinSPR သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0823SpreadcoinSPR သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0293SpreadcoinSPR သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0309SpreadcoinSPR သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.488SpreadcoinSPR သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.172SpreadcoinSPR သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.119SpreadcoinSPR သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.66SpreadcoinSPR သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.3.74SpreadcoinSPR သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0304SpreadcoinSPR သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0338SpreadcoinSPR သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.689SpreadcoinSPR သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.154SpreadcoinSPR သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥2.36SpreadcoinSPR သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩26.29SpreadcoinSPR သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦8.56SpreadcoinSPR သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.62SpreadcoinSPR သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.606
SpreadcoinSPR သို့ BitcoinBTC0.000002 SpreadcoinSPR သို့ EthereumETH0.00006 SpreadcoinSPR သို့ LitecoinLTC0.000407 SpreadcoinSPR သို့ DigitalCashDASH0.000244 SpreadcoinSPR သို့ MoneroXMR0.000249 SpreadcoinSPR သို့ NxtNXT1.73 SpreadcoinSPR သို့ Ethereum ClassicETC0.00327 SpreadcoinSPR သို့ DogecoinDOGE6.39 SpreadcoinSPR သို့ ZCashZEC0.000269 SpreadcoinSPR သို့ BitsharesBTS0.683 SpreadcoinSPR သို့ DigiByteDGB0.709 SpreadcoinSPR သို့ RippleXRP0.0787 SpreadcoinSPR သို့ BitcoinDarkBTCD0.000764 SpreadcoinSPR သို့ PeerCoinPPC0.0735 SpreadcoinSPR သို့ CraigsCoinCRAIG10.1 SpreadcoinSPR သို့ BitstakeXBS0.945 SpreadcoinSPR သို့ PayCoinXPY0.387 SpreadcoinSPR သို့ ProsperCoinPRC2.78 SpreadcoinSPR သို့ YbCoinYBC0.00001 SpreadcoinSPR သို့ DarkKushDANK7.11 SpreadcoinSPR သို့ GiveCoinGIVE47.99 SpreadcoinSPR သို့ KoboCoinKOBO5.05 SpreadcoinSPR သို့ DarkTokenDT0.0204 SpreadcoinSPR သို့ CETUS CoinCETI63.99
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 14:15:03 +0000.